Wararka Maanta: Axad, Sept 30, 2012-Ururrada Bulshada Rayidka oo Warbnixin kasoo saaray kulan Afar Casho uga socday Muqdisho iyo kulan ay la qaateen Madaxewynaha
Qodobbadii ay warsaxaafadeedkooda kusoo saareen ayaa waxay kala ahaayeen:
Xubnaha ururada bulshada rayidka ah (SCSC) oo ay ku bahoobeen 120 urur in ka badan ayaa waxa kulan uga socday magaalada Muqdisho muddo afar maalmood ah.
Ururradu waxa ay si adag u canbaareyayaan dilka is daba-joogga ah ee kasoo cusboonaaday Muqdisho maalmahan dambe. Sida hoobiyayaasha lala beegsaday barakacayaasha, falalkii dhawrka ah ee is-miidaaminta ahaa oo dhacay maalmihii la soo dhaafay oo ay ku dhinteen: carruur, haween, waayeel, suxufiyiin iyo dad kale oo aan waxba geysan.
Inta badan dadkaas waxay ahaayeen ahaayeen dad ku hawlan sidii ay u soo saaran lahaayeen nolol maalmeedkooda.
Waxa kaloo canbaareynaynaa dilalka lala beegsanayo mas'uuliyiinta taasoo loola jeedo in la demiyo isbedelka iyo iftiinka yar ee ummadda u baxaya.
Falalkaas foosha xun waxay caddeynayaan in dhagar-qabayaashu aanay dan ka laheyn nolosha iyo jiritaanka shacabka Soomaaliyeed.
Bulshada rayidka ah waxay ku baaqayaan; in la sugo badbaadinta shacabka ku nool goobaha dhawaan la xoreeyay iyo kuwa ay dagaalladu ka socdaan.
Bulshada rayidka waxay ku baaqayaan kana soo horjeedaan in carruurta iyo dhallinyarda loo adeegsado dagaallada.
Waxaa kaloo ay ugu baaqayaan waalidiinta inay ka digtoonaadaan in ilmahooda loo adeegsado fulinta falalka foosha xun ayna ku dadaalaan sidii ay wax u bari lahaayeen.
Bulshada rayidka ah waxay ugu baaqayaan in dhamaan bulsho-weynta Soomaaliyeed ay ka qeyb-qaataan xasilinta ammaanka iyo dib u dhiska waddanka
Bushada rayidku waxay tacsi u dirayaan dhammaan qaraabadii iyo eheladii ay ka geeriyoodeen dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay qaraxyadii iyo dilalkii qorsheysnaa ee dhawaanahan ka dhacayay magaalada Muqdisho.
Bulshada rayidku waxay garab-taagan yihiin dawladda waxayna diyaar u yihiin inay kala shaqeeyaan amniga, nabadda iyo horumarinta qaranka.
Waxaan soo dhoweynaynaa hirgelinta iyo taaba-gelinta hal-ku-dhiggii madaxweynaha ee ahaa “AMNIGA, AMNIGA, AMNIGA”.